ဆေးရုံ Archives - Myitter
အသုဘရုပ်အလောင်းကို ဆေးရုံကြီးအအေးတိုက်မှ ထုတ်ယူလာပြီး သေဆုံးသူရဲ့အိမ်သို့ပို့လိုက်သောအခါ …
February 14, 2020 Myitter 0
” အမဘာဖြစ်လို့လဲ ” လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်တော့… ဟိုလေ ” ဆရာ အပြင်မှာသေတဲ့အလောင်းကို အိမ်ထဲမသွင်းကောင်းဘူးတဲ့ အိမ်သားတွေခိုက်တက်တယ် တဲ့ ” ပြီးတော့ ရပ်ကွက်ကလဲမကြိုက်ဘူး ရပ်ကွက်နာတယ်တဲ့… ဟောဗျာ…”ဒါနဲ့အမ အခုသေတဲ့သူက အမနဲ့ဘာတော်လဲ လို့မေးလိုက်တော့ “… ဆရာ အခုဆုံးသွားတဲ့သူက ကျွန်မအဖေ ပါတဲ့. အော်…ဟုတ်ကဲ့ […]
” ဝူဟန်က ဆေးရုံ ဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ ပုံရိပ်များ ”
February 2, 2020 Myitter 0
ဝူဟန်က ဆေးရုံဝန်ထမ်းလေးတွေရဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ဖော်ပြနေတဲ့ ပုံရိပ်များ တရုတ်ပြည်အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဝူဟန်မြို့ဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သစ် ကူးစက်ခံရပြီးကတည်းက ကြောက်မက်ဖွယ်ကပ်ဘေးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ ဝူဟန်မြို့ကိုမြို့ပိတ်ထားတာ အခုဆိုရင် တစ်ပတ်လောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မြို့သူမြို့သားတွေဟာ စားရေရိက္ခာတွေ ပြတ်တောက်နေပြီလို့ သိရပါတယ်။ မြို့ထဲမှာလည်း ဆေးရုံတွေကို အမြန်ဆောက်လုပ်နေတဲ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံးက ဆရာဝန်တွေဟာ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုကို […]
” တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာတစ်ဦး ပထမဆုံး စတင်ကုသပျောက်ကင်း ”
January 27, 2020 Myitter 0
တရုတ်နိုင်ငံတွင် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာတစ်ဦး ပထမဆုံး စတင်ကုသပျောက်ကင်း ဝူဟန်မြို့ကို ဗဟိုပြု၍ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် စတင်ပျံ့နှံ့ပြီး နောက် ပထမဆုံး လူနာတစ်ဦး ကုသပျောက်ကင်း၍ ဆေးရုံမှ ဆင်းသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ရှန်ဟိုင်း မြူနီစီပယ် ကျန်းမာရေးကော်မရှင်က ပြောကြားသည်။ ချန်ဟုခေါ်သော အသက် (၅၆)နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးသည် ယင်းရောဂါဖြစ်ပွားနေရာမှ ကုသ ပျောက်ကင်းခဲ့သည်။ […]
” ဆေးရုံမှာ ကူးစက်လူနာတွေပြည့်နေပြီ ထပ်မံရောက်လာတဲ့ လူနာတွေကဆေးရုံအပြင်မှာ သေတဲ့လူတွေလဲရှိတယ် ” ..
January 26, 2020 Myitter 0
ဝူဟန်နယ်သားတယောက်တင်ထားတာ ဆေးရုံမှာ ကူးစက်လူနာတွေပြည့်နေပြီထပ်မံရောက်လာတဲ့လူနာတွေကဆေးရုံအပြင်မှာ သေတဲ့လူတွေလဲရှိတယ်။ရောဂါကူးစက်လာရင် ဆေးရုံပို့လဲအလကားဖြစ်လို့ ရပ်ထဲရွာထဲနဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ သေနေကြပြီ။ ကြားရတဲ့သေနတ်သံတွေကစတိုးဆိုင်တွေမှာ လုယက်သူတွေများပြားလို့သေနတ်ပစ်ဖောက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအွန်လိုင်းပေါ် တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Crd Myat tway oo unicode version ဝူဟနျနယျသားတယောကျတငျထားတာ ဆေးရုံမှာ ကူးစကျလူနာတှပွေညျ့နပွေီထပျမံရောကျလာတဲ့လူနာတှကေဆေးရုံအပွငျမှာ သတေဲ့လူတှလေဲရှိတယျ။ရောဂါကူးစကျလာရငျ ဆေးရုံပို့လဲအလကားဖွဈလို့ ရပျထဲရှာထဲနဲ့လမျးတှပေျေါမှာ သနေကွေပွီ။ ကွားရတဲ့သနေတျသံတှကေစတိုးဆိုငျတှမှော လုယကျသူတှမြေားပွားလို့သနေတျပဈဖောကျနကွေတာဖွဈတယျဆိုပွီးအှနျလိုငျးပျေါ […]
” ဝူဟန် နောက်ဆုံးရ အခြေနေ ” …
ဝူဟန် နောက်ဆုံးရ အခြေနေ ဆေးရုံက ဆရာဝန်အပါဝင် ၅6 ယောက်သေဆုံး အရေးကြီးအခြေနေ အဖြစ် တရုတ်သမ္မတပြော နောက်ထပ် တရုတ်မြို့တွေပိတ် လူဦးရေ ၅၆ သန်းကျော်ဟာ ခရီးသွားလာခွင့်တွေ ပိတ်ခံထားရကနေဒါမှာ ပထဆုံးတွေ့ ပျံ့နံ့တဲ့ နိုင်ငံ ၁၅ နိုင်ငံ ရှိသွားပြီ စုစုပေါင်း ကူးစက်ခံလူဦးရေ […]
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် လူနာတွေကို ကုသရန် တရုတ်က ကုတင် ၁၀၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံကို ခြောက်ရက်နဲ့ အပြီးတည်ဆောက်နေ
January 24, 2020 Myitter 0
ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ လူနာတှကေို ကုသရနျ တရုတျက ကုတငျ ၁၀၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံကို ခွောကျရကျနဲ့ အပွီးတညျဆောကျနေ ကိုရိုနာဗိုငျးရပျဈ လူနာတှကေို ကုသဖို့အတှကျ ဝူဟနျမွို့မှာ ကုတငျ ၁၀၀၀ ဆံ့ ဆေးရုံသဈကွီးကို ခွောကျရကျအတှငျး အပွီးတညျဆောကျဖို့ တရုတျနိုငျငံဟာ ကွီးမားတဲ့ စီမံကိနျးတဈရပျကို စတငျဆောငျရှကျနပေါပွီ။ ဒီ […]
”ဆေးရုံက ခိုးဆင်းသွားတဲ့ လူနာတစ်ယောက် ရေးထားခဲ့တဲ့စာ”…
January 21, 2020 Myitter 0
ဆေးရုံက ခိုးဆင်းသွားတဲ့ လူနာတစ်ယောက် ရေးထားခဲ့တဲ့စာ.. ရေးတတ်သလို ရေးထားခဲ့တဲ့ သူ့စာမှာ ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေအပေါ် အကောင်းမြင်စိတ်တွေတွေ့ရမယ်..ကုန်းကောက်စရာမရှိလောက်အောင် ဆင်းရဲတဲ့ သူ့ရဲ့ ဘဝအခြေအနေကိုပါ မြင်ရမယ်…. ဒါဟာ သူတစ်ယောက်တည်းရဲ့ ဘဝအခြေအနေဆိုတာထက် ရခိုင်အများစုရဲ့ အခြေအနေကိုပါ ဖော်ပြနေသလိုလို.. ဒီစာရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အရှည်ကြည့်ရင် ကြည့်သလောက် တွေးစရာတွေတော့ အများကြီးပါပဲ… […]
ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေရသော ဗေလုဝထံသို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နှင့်အဖွဲ့ သွားရောက်ကာ အားပေးစကားပြောကြားခဲ့…
January 15, 2020 Myitter 0
ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသနေရသော ဗေလုဝထံသို့ ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်နှင့်အဖွဲ့ သွားရောက်ကာ အားပေးစကားပြောကြားခဲ့ပြီး ၂၀၂၀အတွက် အားမွေးထားရန်ပြောကြား ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဥက္ကဌမြို့တော်ဝန် ဦးမောင်မောင်စိုး၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ကော်မတီဝင်-၉ ဦးစိန်အုံး၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဥက္ကဌ ဦးအာကာအောင် ၊ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအဖွဲဝင်-၁ ဦးဇောကျော်အောင်တို့မှဆေးရုံ တက်ရောက်ကုသနေရသော ဟာသသရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဗေလုဝထံ ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှု့အပေါ် သွားရောက်ကြည့်ရှု့အားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ […]
ဆေးရုံက ပြန်လွှတ်တဲ့ သားအိမ်ကင်ဆာကို အမြစ်ဖြုတ်ပေးခဲ့တဲ့ပျဉ်းမမြစ်အစွမ်း
October 31, 2019 Myitter 0
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဆေးရုံကလက်လွှတ်လို့အိမ်ပြန်ခေါ်လာတဲ့လူနာတွေကိုမြန်မာဆေးမီးတိုနဲ့ကုခါမှအမြစ်ပြတ်ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာတွေမကြာခဏကြားဖူးပါတယ်။ခုတစ်ခါလည်းလာပြန်ပါပြီ ၊ သားအိမ်ကင် ဆာဖြစ်လို့ဆေးရုံကလက်လွှတ်တဲ့လူနာတဲမြန်မာဆေးမီးတိုနဲ့ကုလိုက်တာကောင်းသွားပြန်ပြီတဲ့လူနာကလည်းကျွန်တော်တို့ siteဝင်းထဲမှာဆိုတော့သွား၍မေးဖြစ်ပါသည်။ လူနာဖြစ်သူအသက်ခြောက်ဆယ်အရွယ် ဒေါ်ခင်လှိုင်နှင့်တွေ့ဆုံစကားပြောခဲ့ရပါသည်။လူနာမှာလန်းဆန်းနေပြီးယခင်ကကဲ့သို့ယောင်ယမ်းကိုက်ခဲခြင်းလဲမရှိတော့ကြောင်းစိတ်ရှည်စွာဖြေကြားပေးပါသည်။မြန်မာရွက်ပုန်းသီးဆေးစွမ်းများမှာအံ့မခန်းအစွမ်းထက်လှပေသည်။နောက်တစ်နေ့တွင်ပို၍သေချာအောင်ခွဲစိတ်အထူးကုဘွဲ့လွန်သင်းတန်းတက်ရောက်နေသော Dr: မျိုးခန့်ကိုကိုနှင့်အတူလူနာအိမ်သို့ထပ်မံသွားရောက်ခဲ့ပါသည် ။ ဓာတ်ခွဲခန်းဆေးမှတ်တမ်းများအားထုတ်ပြခဲ့ပါသည် ဆေးမှတ်တမ်းများအရCancerCellများပျံ့နှံ့နေ၍သားအိမ်ထုတ်ပစ်သော်လည်းအကြောင်းမထူးနိုင်ကြောင်းဆရာဝန်ကြီးများမှပြောသဖြင့်ဆေးရုံမှဆင်းလာရကြောင်းအိမ်ရောက်သောအခါယောင်းယမ်းကိုက်ခဲသောဝေဒနာအပြင်းအထန်ခံရကြောင်းထမင်းမပြောနှင့်ရေသောက်လျှင်ပင်ပြန်အန်ကြောင်းမထနိုင်ပဲအိပ်ရာထဲလဲနေရကြောင်း သေမည့်နေ့ကိုစောင့်မျှော်နေရကြောင်းနောက်ဆုံးတွင်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီးဒီအမြစ်ကိုသွေးပြီးသောက်ကြောင်းဝေဒနာရှင်ကိုယ်တိုင်မှဆေးမြစ်ကိုကိုင်ပြီးရှင်းပြပါသည် ။ဆေးသောက်ပြီးသည်နှင့်ဝမ်းခေါင်းတစ်ခုလုံးပူရှိန်းသွားပြီးခါးဆီးစပ်တို့တွင်စစ်စစ် စစ်စစ်နှင့်တဖြုတ်ဖြုတ်ခံစားရပါသည်။ကျမအထင်အထဲမှအမြစ်များပြတ်သွားသည်ဟုထင်ပါသည်။၅ရက်လောက်ကြာတော့အကိုက်အခဲသက်သာပြီးအစာလဲစားနှိုင်လာပါတယ်ခုဆေးသောက်တာ၁လရှိပါပြီ လုံးဝမကိုက်တော့ပါထမင်းလဲစားကောင်းလို့ . . .ပြန်ဝလာပါပြီဟုဒေါ်ခင်လှိုင်ကရှင်းပြပါတယ်။ ဆေးမြစ်အမည် ပျဉ်းမမြစ်(အပွင့်ဖြူပွင့်သော)သုံးစွဲနည်း ၁ ဆန်ဆေးရေနှင့်သွေး၍စတီးဇွန်းသောက်ပါ(တနေ့၃ကြိမ်)၂ […]
October 19, 2019 Myitter 0
အ သက် ၁၃နှစ်အရွယ် Quyet Chien ဆိုတဲ့ ကောင်လေးဟာ သူ့ရဲ့ ညီဖြစ်သူ ၂လသားအရွယ်ကလေး ဆေးရုံတင်ရမယ်လို့ သိတဲ့အခါ အမေနဲ့ ညီလေးကို စက်ဘီးနဲ့တင်ပြီး Hanoi မှာရှိတဲ့ ဆေးရုံကို အမြန်ပို့ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ အဖေဖြစ်သူကလည်း အလုပ်ဖြင့်ခရီးသွားတာ ပြန်မရောက်တဲ့အပြင် ဆေးရုံနဲ့ Chien […]
သံဈေးမီးလောင်မှုကို ၃ နာရီအကြာမှာ မီးလုံးဝငြှိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ပိတ်မိနေသူ ၈၄ ဦးကို ကယ်ဆယ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်
ရန်ကုန် လသာ သံဈေး မီးလောင်မှု (ရုပ်သံ)
ဂရနျမွေ ဝယျယူမယျဆိုလြှငျ (စရနျငှေ)မပေးမီ ဒီအဆငျ့ (၃)ဆငျ့ မဖွဈမနလေုပျပါ
လုပ်ငန်းကောင်းလို သူများ အတွက် ကံပွင့်လာဘ်ရွှင် အစီအရင်…